दिवाकर चन्दको सम्पत्ती कौडिको मुल्यमा हडपेका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डे, हिमालयन बैंकका शेयरधनी र प्रमोटरहरुको राजीरोटी खोस्दैः मर्जरको निर्णय नगरेसम्म हिमालयन बैंकको वित्तिय विवरण स्वीकृत नगर्ने राष्ट्र बैंकको धम्कीः कहाँ छ अर्थमन्त्रालय ? - Aathikbazarnews.com दिवाकर चन्दको सम्पत्ती कौडिको मुल्यमा हडपेका नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाण्डे, हिमालयन बैंकका शेयरधनी र प्रमोटरहरुको राजीरोटी खोस्दैः मर्जरको निर्णय नगरेसम्म हिमालयन बैंकको वित्तिय विवरण स्वीकृत नगर्ने राष्ट्र बैंकको धम्कीः कहाँ छ अर्थमन्त्रालय ? -
अहिले नेपाली सञ्चार माध्यामहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक बीच मर्जर हुन्छ की हुँदैन ? मर्जर सकले भाड्यो ? किन ६ महिना हुँदा पनि यी दुई बैंक बीच मर्जर हुँदैन ? भन्ने समाचारहरु आएका छन् । मर्जर जबरजस्ती हुँदैन । ठुला दुई बैंक मर्जर हुन सबै कुरामा सहमती र सहकार्य हुनु जरुरी छ । सत्यतथ्य कुरालाई मात्रै सम्पत्तीमा राख्न पाइन्छ । तर, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले धेरै सम्पत्ती देखाउन लुटेका, हडपेका र मुद्दा मामिला परेको सम्पत्ती मर्जरको डिडिएमा राखेपछि मर्जर विवादमा फसेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
कसैले मर्जर भाँडेको छैन । यति मात्रै हो कि ५ अर्ब भन्दा बढि आयकर समेत नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले छली गरेको फेला परेपछि यी दुई बैंकको मर्जर विवादमा फसेको हो भन्दा अब चाहि अन्यथा नहोला । भनिन्छ विवाह गर्न सबैकुरा मिल्नु पर्दछ । जात, मन, मान प्रतिष्ठा र समानता अनि मात्रै विवाहको साइत हेरिन्छ । दुई बैंक मर्जर हुनु पनि विवाह हुनु जस्तै हो । सबै विषयमा खुल्ला किताव जस्तै गरि छलफल हुनु जरुरी छ । लुकाएर ढाटेर, छक्याएर मर्जर हुँदैन । र हुनु पनि हुँदैन । यस्तै यस्तै भएको छ अहिले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक बीचको मर्जर भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।भनिनछ ४ वर्ष सम्म हिमालन बैंकका कर्मचारीहरुको तलब नबढाउने तर मर्जर हुने वित्तिकै नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका कर्मचारीहरुको तलब बढ्ने । यो कस्तो सहमती हो गर्भनर साब ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले विवादमा फसेको, लुटेका, मुद्दामामिलामा परेका लाख होइन करोड होइन अर्बौको सम्पत्ती डिडिएमा मुल्याङ्कन गराई देखाएको भेटिएको छ यस्तो सम्पतीलाई मान्यता दिएर मर्ज गर्न कति उचित छ गर्भर साब यति मात्र होइन भनिन्छ राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकले पठाएको लाभाशं घोषणाको वित्तिय विवरण मर्जर निर्णय सञ्चाल समितिबाट नगराएसम्म स्वीकृत नदिने भन्दै दबाब दिनु कति उचित छ ? हुन कानूनमा यस्तो देखिएको छ ?
यो चाहि खालीको पक्ष पक्कै बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । के राष्ट्र बैंकको काम जबरजस्ती मर्जर गराउने हो कि, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हो ? यो पक्ष गंम्भिर बन्दै गएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक बुझेका गर्भनर भनेर । बुझ्नेहरुले अब प्रश्न उठाइरहेका छन् । के मर्जर गर्दा सबै कुरा छुट हुन्छ । के प्रक्रिया मिलाउन पर्दैन, यि विषयमा अहिले चर्चाको विषय बनेका छन् ।
हामीले समाचार दिनु बदमासी भएको कुरा बाहिरल्याउनु मर्जर भाड्नुहोइन । सत्यतथ्य बुझ्नु राष्ट्र बैंकलाई घच्घचाएको चाहि सत्य हो ।
गर्भनर साब दशेको कानून भन्दा माथी कोही छैन । सबैले कानून पालना गर्नुपर्दछ । के राणा र पाण्डे परिवारलाई चाहि कानून लाग्दैन । यो राणा शासन होइन, राजतन्त्र होइन । गणतन्त्र नेपाल हो । त्यसकारण प्रक्रिया पद्दती, नियम, कानून भित्र रहेर मर्जर हुनु पर्दछ भन्ने आम हिमालयन बैंकका लाखौ शेयरधनी र प्रमोटरहरुको चाहना हो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । हेक्का होस् ।
दिवाकर चन्दको सम्पत्ती हडपेर उनीको ज्यान लिएको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले अब हिमालयन बैंकका लाखौ शेयरधनी र प्रमोटरहरुको रोजीरोटी खोस्दै छ भन्दा फरक पर्दैन । राणा परिवार र पाण्डे परिवारको स्वार्थका कारण अरु लगानीकर्ताहरुको उठिबास हुँदैछ भन्दा फरक पर्दैन । तर, निकम्मा राष्ट्र बैंक राणा र पाण्डे परिवारको छत्र छायामा तै चुप मै चुप छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मान्यू हेक्का होस् । सचेत भया ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा डोनेसन बक्स हस्तान्तरण
१३.३१ प्रतिशतले बढ्यो नेपाल बैंकको खुद नाफा
१३ फर्म विरुद्ध सवा अर्ब राजस्व छलि गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धानको मुद्दा
हिमालयन रिले कम्पनी रजिष्ट्रारबाट पायो कार्य सञ्चालन अनुमतिपत्र
बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पुर्ण खर्च बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नु पर्ने
सैनिक कल्याणकारी कोष र प्रभु बैंक विच सम्झौता